यी चार राशिका ब्यक्तीहरु धनी हुनुका साथै अरुमाथि सधै राज गर्ने गर्छन् अनि तपाईको राशि पर्यो की परेन ? - Sabal Post
यी चार राशिका ब्यक्तीहरु धनी हुनुका साथै अरुमाथि सधै राज गर्ने गर्छन् अनि तपाईको राशि पर्यो की परेन ?
२३ बैशाख २०७६, सोमबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
धेरै सम्पति कमाउने सुखी जिन्दगी बिताउने चाहना सबैको हुन्छ। जसले धन सम्पति कमाउँछन् उसको जीन्दगी सुख सयलको साथ बित्छ।कसले धेरै धन कमाउँछ भन्ने त थाहा हुदैन् तर विभिन्न माध्येको सहायताले पनि यस्ता कुराहरु थाहा पाउन सकिन्छ। तपाईहरु धेरैको जवाफ हुन सक्छ जसले कडा मेहनत परिश्रम गर्छ उसले कमाउँछ भन्नु होला तर यस्तो हैन। आज हामी ज्यातिष विज्ञानले स्पष्ट पारेको केही राशीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छौँ।
वृष राशी : वृष राशी हुने व्यक्तिहरु जसले आफुमाथि आएको अवसरलाई सहिरुपमा सदुपयोग गर्न सक्यो भने धनको वर्षा नै लाग्ने ज्योतिष विज्ञानले बताएको छ । यो राशीको स्वामी शुक्र हुने भएकाले वृषमा शुक्रको प्रभाव बढी देखिने भएको छ । शुक्र ग्रहलाई धन, वैभव, रोमान्स र विलासिताको कारक मान्ने गरिन्छ।त्यसैले गर्दा वृष राशि हुने व्यक्तिले जहिले पनि वैभवका साथ जीवन बिताउने गर्छन् । यी राशी भएका व्यक्तिलाई धनी बन्ने अवसरहरु कयौँ आउने गर्छन् ।
वृश्चिक राशी : सबै प्रकारका गुणले भरिपुर्ण भएको यो राशी धनि हुने दोस्रो नम्बरमा आउने गर्छ । यो राशी भएका मानिसरु आफ्नो मन परेको कुरा लिनको लागि जहिल्यै पनि तयार हुने गर्छन् । उनीहरु भौतिक सुख सुविधाको निकै लालस गर्ने भएकाले जुन कुरा प्राप्त गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कर्कट राशी : यो राशी भएका मानिसहरु भौतिक सुख सुविधा र आरामको लागि निकै जुझारु हुने गर्छन् । उनीहरु जति लालहित हुने गर्छन् त्यतिकै भाग्यलेपनि साथ दिने गर्छ । त्यसकारण उक्त राशी भएका मानिसमा धनि बन्ने सबै गुणहरु प्राप्त हुन्छन्।
सिंह राशि : सिंह जस्तै शक्तिशाली हुने भएकाले सिंह राशी भएका मानिसहरु धन कमाउनको लागि निकै आरामदाई जीवन व्यतित गर्नको लागि कडा मेहनत गर्ने गर्छन्। यी राशी भएका मानिसहरुमा धनि बन्न सम्पूणे गुणहरु भएको हुन्छ।
चीनसँगको व्यापार वार्ता सकारात्मक : डोनाल्ड ट्रम्प
आप्पा’ को गीत ‘साउने झरी’ रिलिज
कात्यायनी माताको पूजा गर्नाले मिल्छ यस्तो लाभ